Hadda Dalbo aalada la isku baaro adigoo guriga jooga.
Somali-Guri kasta oo Minnesota ku yaal wuxuu xaq u leeyahay inuu dalbado afar xirmo oo ah aalada sida degdega ah la isaga baaro KOFID-19 waxaana kujira (sideed baaritaan) oo lacag la’aan ah inta ay kuu taalo aalada baarista.
Hadda Dalbo aalada la isku baaro adigoo guriga jooga. arrow-right
Foomka dalbashada waa ingiriisi iyo isbaanish wakhtigan. Ma u baahan tahay in lagaa caawiyo dalbashada baaritaanadaada guriga?
Ka wac khadka MDH COVID-19 ee dadweynaha 1-833-431-2053 Isniin - Jimco: 9 subaxnimo ilaa 7 galabnimo, Sabtida: 10 subaxnimo ilaa 6 galabnimo.
Baaritaanka guriga wuxuu kaa caawinayaa go'aaminta halista aad u leedahay inaad faafiso COVID-19.
Baaritaanka degdega ah ee guriga waxa ay caawisaa ogaanshaha fayraska sababa COVID-19. Waxaad ku qaadi kartaa baaritaanka dhacaanka sanka meel kasta oo aad natiijadana ku heli kartaa ilaa 15 daqiiqo gudahood.
Baaritaanka degdegga ee lid jid-galaha (Antigen) ee guriga ayaa la isticmaali karaa wakhti kasta, sida haddii aad leedahay astaamo COVID-19, aad ka agdhowaatay qof qaba COVID-19, ama ka hor kulanka gudaha ah. Wax badan ka baro Is-Baaridda COVID-19.
Baaritaanada diyaar u ah dalabka:
Waa baaritaannada lid jid-galaha degdega ah ee guriga, ma aha PCR
Meel kasta ayaa lagu qaadi karaa
Kugu siin karaan natiijada 15 daqiiqo gudahood (uma baahna in shaybaadhka la dhigo)
Way shaqeeyaan haddii aad leedahay astaamaha COVID -19 iyo haddii kale
Way shaqeeyaan haddii aad wada qaadatay tallaalka COVID -19 iyo haddii kale
Waxa kale oo loo yaqaanaa baaritaanka iskaa iskaga-qaadidda ama la iibsato rijeeto la'aan (OTC).
Dalbo baritaankaaga guriga hadda.
Xirmo kasta waxay ka koobantahay labo xabo oo ah aalada la isku baaro. Guri kasta waxaa loo xadiday inuu helo afar xirmo oo ah aaladaha la isku baaro. Waa wax la heli karo inta sahaydu ay taalo.
Dadka isticmaalaya qalabka baaritaanka waa inay raacaan tilmaamaha baaritaanka ee soo saaraha.
Ogeysiis: Saraakiisha caafimaadka waxay kordhiyeen taariikhda uu dhacayo iHealth ee baarista guriga. Dhammaan imtixaanada iHealth ee dhacaya taariikhda 09/29/2022 ama ka hor waxaa la isticmaali karaa seddex bilood markay dhacaan kadib waxaana la lasii isticmaali karaa ilaa wakhtigaas.
Baro wax badan oo ku saabsan sida loo sameeyo baaritaan oo loo akhri su'aalaha badanaa la is-weydiiyo.
Fadlan raac tilmaamaha dhamaystiran ee la socdo qalanka baaritaanka. Si aad u ogaato sida uu baaritaanka loo sameeyo, waxaad daawan kartaa muuqaalkan: How to use the iHealth COVID-19 Antigen Rapid Test.
Sideen u isticmaalaa qalabka baaritaanka